Fikambanana Tia Fanoritsoritana Sary Manavatsava An’i Eoropa Atsinanana Sy Afovoany Ao Amin’ny Twitter Manaitra Faniriana Te-Hamoron-Javatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Febroary 2016 6:12 GMT
Lohahevitra: “Raha velona tamin'izao andro izao ilay mpanao tononkalo sy filôzôfy Njegoš” avy amin'i Zombijana Bones. Nahazoana alalana ny famoahana indray ny sary.
Isaky ny Alatsinainy, mitsidika an'i @crtkamo, izay midika hoe “mi-doodle izahay” [manoritsoritra sary izahay] amin'ny fiteny manakaiky indrindra ny Serba, Bosniaka ary Kroaty, ny mpiondana sary manerana an'i Yôgôslavia taloha. Amin'io andro io dia mamoaka ny doodle [soritsori-tsary] ho amin'ny herinandro ireo olona ao ambadik'ity fikambanana mpanoritra sary ity. Manomboka sy manolotra ny sanganasany amin'ny fisiahana amin'ny diezy #crtkamo avy eo ny mpandray anjara.
Efa nandalo tamin'ny lohahevitra amin'ny fanoritsoritana sary ity avokoa ny “zavatra mitovy habe amin'ny vola vy” sy ny “volo amin-kilaometatra”, mankany amin'ny kilalao sy ny piraty, trano nofinofisina, “lanitra faly” ary asara, ka hatramin'ny David Bowie sy ny Profesora Snape avy ao amin'ny andiantantara Harry Potter. Mampiasa teknika, angesony isankarazany ireo artista mpandray anjara ary mifampizara ny asany amin'ny hafa.
“Tsy fifaninanana io” no lalàna lehibe indrindra amin'ny lalao. Maro amin'ny sary no mahazo re-tsioka avy amin'ny kaonty voalaza etsy ambony, ary izay ihany no hany loka omen'ny mpikarakara. Manazava izany tamin'ny antsafa nifanaovana taminy i Zombijana Bones mpiara-manorina ny kaonty:
Miasa amin'ny maha-mpahay ravaka azy i Zombijana teraka tao Podgorica ary vehivavy artista antserasera malaza manana mpanjohy 12.000 ao amin'ny Twitter sy mpitia 67000 ao amin'ny Facebook. Efa nanafatra t-shirts ahitana ny fandravahana ny siokany misy fanahy ny mpankasitraka manerana ny faritra Yogoslavia taloha ary tamin'ny Mey 2014 dia nanatontosa fampirantiana POINT tao amin'ny Toeram-Pivoriana Lehibe ao Sarajevo izy nivarotra ny sanganasany hanangonam-bola ho an'ireo lasibatry ny tondradrano tamin'io taona io.
Ny tetikasa “Manoritsoritra izahay” dia nanomboka tamin'ny fiaraha-miasa teo amin'i Zombijana sy ny artista mahaleotena Živko Kondić. Rehefa niala an-daharana ity farany tamin'ny Novambra 2014 noho ny tsy fahampian'ny fotoana, dia ny mpikambana navitrika indrindra, Aleksandra Tosman avy ao Belgrade, no nisolo ny toerany ho famelomana ilay fisantaran'andraikitra. Tsy nanabanga herinandro intsony izy mirahavavy nanomboka hatreo, nifandimby nametraka fotoana sy nanangona ny asa. Nampiasa ny tetikasa ho amin'ny vonjy voina mahaolona ry zareo, ary indraindray no mamoaka kadoa toy ny boky na tapakila ijerena sarimihetsika ho an'ny mpandray anjara. Na izany aza, ny tanjona voalohan'ny rehetra mandray anjara dia ny “hanala hamohamo sy hitondra zavakanto bebe kokoa amin'ny aterineto.”
Ny hany zavatra takiana aminao idirana amin'ny #crtkamo dia ny faniriana hanao kisarisary. Fanehoana feno: Samy efa nandray anjara amin'ny “manoritsoritra izahay” na ny zanako lahikely na izaho, [mpanoratra amin'ny teny anglisy] ary ny zavatra niainana tamin'izany no ahafahako miteny fa ekena avokoa ny fitaovana rehetra ahafahanao maneho ny tianao avokoa, na amin'ny pensilihazo sy kahie, na amin'ny post-it, fakantsary nomerika, scanner, na amin'ny rindrambaiko fandokoana.